Ijethi yabucala kaElvis Presley iyathengiswa-ngexabiso elisengqiqweni kakhulu - Indlela Yokuphila
Eyona Indlela Yokuphila Ijethi yabucala kaElvis Presley ilungele ukuThengiswa ngeXabiso-ngeXabiso eliQinisekileyo
Umbono wangaphandle wenqwelomoya.Iifandesi eziBukhoma
Ukuba ungumlandeli kaKing Rock of Rock n ’Roll kwaye uhlala ufuna ijet yodumo yabucala yeediliya, namhlanje lusuku lwakho lwethamsanqa. Enye yezinto ezininzi ezaqokelelwa ngu-Elvis Presley yayiziinqwelomoya zabucala, awayezenzela zona ngendlela yakhe engenakuthelekiswa nanto. NgoJanuwari 2015, ezimbini zezo jets, tInja eyiHound II kunye noLisa Marie, abeza bexhotyiswe ngamabhanti ezihlalo ezifakwe igolide kunye neesinki ezingama-24 zeekarati ezaphuke ngegolide, yaya kwifandesi . Ifandesi yahlangatyezwa ngoqhanqalazo, nangona kunjalo, kuba bebeyinto enjalo kumyuziyam eGraceland ngaphezulu kweminyaka engama-30. Ngo-Epreli olandelayo, yayinjalo bagqibe kwelokuba baya kuhlala ngokusisigxina kubonisiwe kubakhenkethi eGraceland emva kwayo yonke loo nto.
Ngoku, nangona kunjalo, enye yeejets zakhe, eyayikade ingumtsalane kubakhenkethikwiziko lomoya iRoswell International eNew Mexico, Iyathengiswa kwifandesi . Eli xesha kunokwenzeka ukuba lithengise, kuba ngokungafaniyo neHound Dog II kunye noLisa Marie, le ndiza yayinabanini babucala ngaphezulu kweminyaka engama-35, kwayeyiyo yodwa inqwelo-moya eyayikhe yeka-Elvis isabucala. Oko kuthetha ukuba le inokuba yeyakho kwaye udubule kuphela inqwelomoya yakwa-Elvis.
Ngokutsho kwindawo yefandesi , leNgo-1962 u-Lockheed Jetstar Jet unexabiso lemvakalelo kuba u-Elvis wayengumnini kayise, uVernon Presley. Eyaziwa ngokuba yiJet eLahlekileyo, inqwelomoya ikhutshiwe ngesimbo sokutyikitya kwenkwenkwezi, kubandakanya izihlalo ezibomvu, ezibomvu ze-velvet eziye zatshona ngokucacileyo kubunzima bemizimba eliqela, izitya zokuhlambela zemabhile, kunye neepompo zegolide (singasathethi ke ezindala- IiTV zesikolo kunye nento ebonakala ngathi yimicrowave). Indawo yokuhlala ye-velvet.Iifandesi eziBukhoma
Iimpawu zeMarble.Iifandesi eziBukhoma
‘Igumbi lokuhlambela.’Iifandesi eziBukhoma
Ulwazi oluninzi kunokuba ufuna i-jet ngaphandle kwenjini.Iifandesi eziBukhoma
Umthengisi ubanga ukuba i-jet ikwimeko efanayo naleyo yayikuyo xa u-Elvis wayengumnini wayo, eyoyikekayo kodwa ekwathetha ukuba ayinayo i-injini okanye i-cockpit esebenzayo. Ukuba ufuna ukubhabha olu sana, kuya kufuneka ulubuyise. Okanye unokuyigcina ngasemva kwakho njengebhari epholileyo.
Ngelixa inqwelo moya kulindeleke ukuba ithengise phakathi kwe- $ 2 kunye ne- $ 3.5 yezigidi, ibhidi yokuqala yayiyi- $ 10,000. Ifandesi iya kuqhubeka kude kube ngoMgqibelo, kwaye okwangoku eyona bhidi iphezulu kwi-59 yeedola yi- $ 351,000 kuphela. Kusengqiqweni, kunikwa ukuba, njengoko iwebhusayithi igxininisa, i-jet inokufumana umnini wayo omtsha izigidi zeedola kwimiboniso, okanye iifizi zokungena njengomtsalane. Nangona ivoti yam isekwindawo epholileyo yangasemva.
Umthengi ophumeleleyo uza kufumana ingxelo efungelweyo nesayiniweyo evela kumthengisi ngokubhekisele kubunyani bayo, kwaye kubalulekile ukuba uqaphele ukuba kuya kufuneka idityaniswe ukuze ithunyelwe, nangona inkampani yefandesi ithembisa ukunceda oku ngeendleko zomntu oza kuphumelela.
Cofa apha ukuba unomdla wokufaka ibhidi kwaye ungumnini wale nxalenye incinci yembali yomculo.
UDiana Bruk ubhale ngokubanzi malunga nokuthandana, ukuhamba, ubudlelwane baseRussia-Melika, kunye nendlela yokuphila yabasetyhini I-cosmopolitan, i-Esquire, i-Elle, i-Marie Claire, i-Harper's Bazaar, i-Guernica, i-Salon, i-Vice, uPhononongo lwe-Paris , nezinye iimpapasho ezininzi. Njengomhleli wangaphambili we-Viral Content kwi-Hearst Digital media kunye naye kwi-BuzzFeed, unokuqonda okukhethekileyo kwi-Intanethi kunye namava amakhulu kumabali anomdla wabantu. Unokufumana okungakumbi malunga noDiana kwi iwebhusayithi yakhe okanye Twitter .
Khonza ngokuSoft: Abathengi abaThenjisiweyo baka-Uber baSimahla Ice Cream kodwa khange bahambise
Uluhlu olungapheliyo lwama-Movie angama-500 aPhambili
5 Abangaphandle baSebenzisa uMongameli ngo-2020-kunye namaThuba abo okuphumelela
I-meghan duchess ye-sussex 90210
cbs 60 imizuzu steve bannon
ukungqubana kwebhendi ekuphela kwayo ebalulekileyo
I-obama yivolumu yamaSilamsi
Ixesha le-ray donovan 4 isiqendu 5
Iindleko zokwamkelwa kwihlabathi le-disney
elona xesha lilungileyo lokuthatha iiprobiotic